Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxtarka cayaaraha | Ragga Stylish
Had iyo jeer waxaa la yiraahdaa ku celcelinta nooc ka mid ah isboortiga waxay u fiican tahay caafimaadka jirka iyo maskaxda. Dad badan, sameynta isboortiga waa ku qasab ama waa in lagu qasbaa maaddaama ay leeyihiin nolol deggan. Jimicsiga jirku wuxuu hagaajiyaa shaqada maskaxda, madax-bannaanida, xawaaraha, iyo dareenka ladnaanta guud ee naga caawisa inaan helno caafimaad iyo muuqaal wanaagsan.
Qodobkaan waxaan kuugu sharaxeynaa waxa ay yihiin faa iidooyinka cayaaraha.
1 Ciyaaraha iyo qaab nololeedka
2 Faa'iidooyinka cayaaraha ee caafimaadka jirka iyo maskaxda
3 Faa'iidooyinka isboortiga ee dhinaca nafsaaniga ah
Ciyaaraha iyo qaab nololeedka
Dad badan, isboorti waa qeyb ka mid ah qaab nololeedkooda. Waxaa jira kuwa sameeya kubbadda cagta, kubbadda koleyga, tennis ama si fudud u yaqaana sida loo ordo ama loo jeclaado maadooyinka qaarkood sida Crossfit ama culeyska qaadista. Waxaa jira kuwa sidaas u maleynaya kuwa ku jira qolka jimicsiga si ay u helaan culeys muruq ah ama dufanku u dhinto ma sameeyaan isboorti. Si kastaba ha noqotee, iyagu waa edbiyo gacan ka geysanaya hagaajinta waxqabadka jireed iyo maskaxeed iyo inaad ku guuleysato himilada aad naftaada u dejisay. Ujeeddooyinka caafimaadka leh sida helitaanka cufnaanta murqaha, hagaajinta waxqabadka cayaaraha, hagaajinta adkeysiga jirka, xoogga, ama luminta dufanka xad-dhaafka ah.
Waxa kale oo jira kuwa si fudud jimicsiga u aada si ay "qaab u yeeshaan". Jimicsiga jirka waa in lagu sameeyaa barnaamijyada waxqabadka ee horay loo soo jeediyay. Ma bilaabi kartid tababar ama ciyaaro isboorti la'aan. Haddii, tusaale ahaan, aad go'aansatay inaad kuhesho murqaha jimicsiga, waa inaad qorsheysaa labadaba cuntadaada iyo tababarkaaga. Waxaa jira kumanaan doorsoomayaal ah oo lagu xisaabtamo si loo waafajiyo qorshaynta heerkaaga iyo yoolkaaga. Haddii aad tahay qof bilow ah, waa inaad ku tababbarto mug, xoog iyo soo noqnoqod kugu habboon jawaabtaada iyo awoodda soo kabashada. Sidaa darteed, tababarayaasha shaqsiyadeed waxay shaqo fiican ka qabtaan aaggan.
Isdhexgalka ka dhici doona inta udhaxeysa jirka iyo waqtiga iyo dhaqdhaqaaqa, barashooyin badan ayaa lagu dhisi karaa qofka bini'aadamka ah. Barashadan waxaa lagu gaarayaa isku xigxiga khibradaha waxbarasho iyo gudaha ee ku-dhaqanka isboortiga. Kani waa, qofku si farsamaysan uma qaban karo jimicsiga jimicsiga ama si isboorti ah uguma ciyaari karo markii ugu horreysay, laakiin waa waayo-aragnimo la helay waxyar in yar ka dib waqtiga iyo ku-celcelinta joogtada ah.
Tani waa mid ka mid ah khaladaadka ugu waaweyn ee dadku galaan markay bilaabaan inay ciyaaraan isboorti. Waxay rajeynayaan inay gaaraan qorshaha saxda ah iyo kaamilnimada aan jirin. Goor dambe, waxay garwaaqsadaan inay ka muhiimsan tahay in la joogteeyo waqtiga marka loo fiiriyo dhammaystirka aan jirin.
Faa'iidooyinka cayaaraha ee caafimaadka jirka iyo maskaxda
Ururka caafimaadka adduunka ayaa ku qiyaasaya inta udhaxeysa 9% iyo 16% dhimashada ka dhacda wadamada horumaray waxaa u sabab ah jimicsi la’aan. Tani waa waxa aan ugu yeerno nolol deggan. Xaaladda caafimaadka dadka waa qodob aasaasi ah oo ay weheliso go'aamiyayaal kale sida da'da, xaaladda nafaqada, hibada hidde, culeyska iyo tubaakada. Isbedeladaan ayaa ah waxa ka kooban caafimaadka jir ahaaneed ee qofka ka baxsan isboortiga. Haddii qaab nololeedka qofku caafimaad qabo, oo lagu daro isboortiga, waxay yeelan kartaa saameyn isdhexgal ah. Aynu aragno qodobbada ugu muhiimsan ee faa'iidooyinka cayaaraha ee caafimaadka:
Ciyaaraha isboortiga ayaa si isdaba joog ah u caawiya hoos u dhigida garaaca wadnahaaga nasashada. Tani waxay caawineysaa in wadnuhu uusan garaacin garaac badan daqiiqad kasta ama in, markaan dadaal sameyno, xaddiga dhiigga aan ku bixinno garaac kasta ayaa kordha. Tani waxay noo horseedaa inaan helno ogsijiin fiican maskaxda waxayna muruqyadeenu si fiican uga shaqeeyaan jawaabta.
Waxay kicisaa wareegga gudaha muruqa wadnaha taasoo keenta in cadaadiska dhiigga la yareeyo oo wareegga dhiigga uu ku sii kordho murqaha oo dhan.
Waxay yareysaa sameynta xinjirowga xididdada dhiigga gudihiisa taas oo naga caawinaysa in aanu yaraano istaroogyada iyo xinjirowga maskaxda.
Dumar badan ayaa ka walaacsan muuqaalka xididdada xididdada dhiigga xitaa markay yar yihiin. Adoo hagaajinaya wareegga isboortiga, waxaan ka hortageynaa muuqaalka xididdada xididdada dhiigga tan iyo markii aan hagaajineyno howsha xididdada dhiigga.
Markii aan jimicsiga sameyno waxaan sidoo kale kordhineynaa awooda jirka si uu uga faa'iideysto oksijiinta ku timaadda wareegga. Tani waxay ku shaqeysaa dheef-shiid kiimikaadka iyo waxqabadka enzymes muruqyada.
Kuwa miisaanka culus leh, jimicsiga jirku wuxuu caawiyaa kordhinta dufanka inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jirka. Tani waxay gacan ka geysaneysaa raadinta badan ee luminta dufanka iyo murqaha muruqyada.
Waxay hagaajinaysaa dulqaadka gulukooska doorbiday daaweynta sonkorowga.
Kuwa leh heerarka sare ee kolestaroolka, jimicsiga jirku wuxuu gacan ka geysan karaa yareynta kolestaroolka xun iyo kordhinta kolestaroolka wanaagsan.
In kasta oo ay dad badani u haystaan ​​in aanu xidhiidh la lahayn, haddana mid ka mid ah waxtarka cayaaruhu waa taas waxay iskaashanayaan dayactirka nolol galmo oo buuxda.
Yaanan iloobin in lagu sameeyo isboortiga waxaan xoojin doonnaa dhismayaasha sida lafaha, seedaha, seedaha iyo carjawda, hagaajinta shaqada dhammaan nidaamka muruqyada lafaha iyo hagaajinta tayada nolosha.
Faa'iidooyinka isboortiga ee dhinaca nafsaaniga ah
In kasta oo aanu si toos ah isugu xidhnayn, haddana waxaa jira caddayn ah in dadka sameeya dhaqdhaqaaq jireed inta badan noloshooda ay ka sahlan yihiin inay sigaarka ka joojiyaan kuwa aan samayn nooc jimicsi ah.
Isboortiga sidoo kale wuxuu leeyahay faa iidooyin kale oo dhinacyada dhimirka ah sida:
Waxay kordhisaa dareenka ladnaanta waxayna yareysaa buuqa maskaxda. Tani waxay dhacdaa iyada oo ay ugu wacan tahay sii deynta endorphins ee kor u qaada dareenka wanaagsan jimicsiga ka dib.
Waxay kaa caawineysaa yareynta heerka gardarrada, welwelka, cidhiidhiga, xanaaqa iyo niyadjabka. Tani waxay muhiim u tahay dadkaas nolosha ku mashquulsan oo aan aqoon sida ay u maareeyaan shucuurtooda si wanaagsan.
Waxay yareysaa dareenka daalka, siinta tamar badan iyo karti shaqo.
Waxay fududeyneysaa dhaqdhaqaaqyada nolol maalmeedka qaar iyadoo hagaajineysa nidaamka tareenka.
Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, waxay hagaajisaa hurdada. Nasashada waxay ku dhowdahay inay muhiim u tahay cayaaraha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxtarka cayaaraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa'iidooyinka cayaaraha
Cuntooyinka leh fitamiin K